အဓိပ္ပါယ်မရှိဆုံး အကြောင်းအရာတွေနဲ့ Netizen တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို ခံခဲ့ရဖူးတဲ့ BTS အဖွဲ့ဝင်များ | News Bar Myanmar
အဓိပ္ပါယ်မရှိဆုံး အကြောင်းအရာတွေနဲ့ Netizen တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို ခံခဲ့ရဖူးတဲ့ BTS အဖွဲ့ဝင်များ
BTS အဖွဲ့ဟာ ယခုအချိန်မှာဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာကျော် လျှမ်းလျှမ်းတောက်အဖွဲ့ ဖြစ်နေပါပီနော်။ ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသလို နှစ်တော်တော်ကြာ BTS အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ကိုရီးယား Netizen တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ ဝေဖန်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ ဝေဖန်ခံခဲ့ရဖူးလဲ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။
1. Jungkook ရဲ့ တက်တူး
Jungkook ဟာ သူ့ရဲ့ တက်တူးတွေကို ပထမဆုံးအကြိမ် ပြသခဲ့တုန်းက ပရိသတ်တော်တော်များများကတော့ တက်တူးတွေရဲ့ နောက်ကွယ်က ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အဓိပ္ပါယ်လေးတွေကြောင့် Jungkook ကို အချစ်ပိုခဲ့ရပါတယ်။
သို့သော်လည်း အချို့ Netizen တွေကတော့ ဒီတက်တူးတွေကို သဘောမတွေ့ခဲ့ကြပါဘူး။ အောင်မြင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ BTS အနေနဲ့ တက်တူးထိုးခြင်းဟာ အဖွဲ့ရဲ့သိက္ခာကျစေနိုင်တဲ့အတွက် ဘယ်အဖွဲ့ဝင်မှ တက်တူးမထိုးသင့်ဘူးတဲ့လေ။ တော်တော် အဓိပ္ပါယ်မရှိပါပဲနော်။
2. V ရဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်
BTS ရဲ့ V ကိုလည်း netizen အချို့က ရုပ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်ခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ အခြားအနုပညာရှင်တွေနဲ့ယှဉ်ရင် သာမာန်ရုပ်ပဲ ပေါက်လို့ပါတဲ့။ ဒီလို အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ ဝေဖန်မှုမျိုးလည်း V ကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးပါတယ်။
3. ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတင်ခဲ့လို့ အပြစ်ပြောခံခဲ့ရတဲ့ RM
RM ဟာ တစ်ခါ Twitter မှာ သူ့ရဲ့ ပြုံးနေတဲ့ပုံကို ARMY တွေအတွက် တင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အပြစ်ရှာနေတဲ့ Netizen တွေကတော့ RM ဟာ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ပုံပေါက်အောင် အလွန်အကျွံကြိုးစားနေတယ် ဆိုပြီး အပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။
4. အခြားအဖွဲ့ရဲ့ သီချင်းဆိုမိလို့ ဝေဖန်ခံခဲ့ရတဲ့ V
ဒီအဖြစ်အပျက်ကတော့ BTS Mcountdown မှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ အချိန်တစ်ချိိန်ကပါ။ BTS ရဲ့ ဆုအတွက် ကျေးဇူးတင်စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာ V ဟာ Big Bang ရဲ့ Loser သီချင်းကို ဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ Netizen တွေကတော့ V ဒီလို မိမိအဖွဲ့အနိုင်ရတဲ့အချိန်မှာ အခြားအဖွဲ့ရဲ့ သီချင်းကိုဆိုတာဟာ ရိုင်းဆိုင်းတဲ့ အပြုအမူပါတဲ့။
5. Twitter က Tweet တစ်ခုကြောင့် ဝေဖန်ခံခဲ့ရတဲ့ Jungkook
ပြိးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တုန်းက Jungkook ဟာ အသေးစား ကား Accident တစ်ခုမှာ ပါဝင်ပတ်သတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ Accident ဖြစ်တဲ့နေ့မှာပဲ Jungkook ဟာ ပရိသတ်တွေအတွက် Selfie ပုံတစ်ပုံတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီ Selfie ဟာ Accident ပီးမှ ရိုက်တာဟုတ်မဟုတ် မသေချာပဲနဲ့တောင် Netizen တွေကတော့ ဒီလို Accident ဖြစ်တဲ့နေ့မှာ Selfie တင်တာဟာ ဂရုမစိုက်လွန်းရာကျပါတယ်တဲ့လေ။ ဘာလုပ်လုပ်ကို သူတို့အပြောနဲ့ မလွတ်ပါဘူး။
ဝေဖန်မှုရှိမှ အောင်မြင်တာဆိုသော်လည်း တချို့အကြောင်းအရာတွေကတော့ အဓိပ္ပါယ်မရှိလွန်းပါဘူး။ ဘာပဲပြောပြော ဒီ Netizen တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို ကြံ့ကြံ့ခံပြီး BTS ကတော့ အောင်မြင်မှုတွေယူနေတာပါပဲမလား။
Next တရားခံကိုဖမ်းပြီး မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို သူရဲကောင်းဆန်ဆန် ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ မင်းသား Kim Min Seok »
Previous « အနုပညာလုပ်ငန်းများမှ အချိန်ကာလကြာမြင့်စွာ အနားယူခဲ့သော အနုပညာရှင်များ